‘रेखालाई मेरो सम्पत्ती नदिनु’ भन्दै श्रीमान मुकेशले देह त्याग गरे – Online Nepalaja
‘रेखालाई मेरो सम्पत्ती नदिनु’ भन्दै श्रीमान मुकेशले देह त्याग गरे
February 13, 2021 79
एजेन्सी । बलिउड नायीका रेखाको जिवन रहस्यले भरिएको छ । उनको नीजि जिवनको बारेमा चासो राख्नेहरु धेरै छन् । तर उनका बारेमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् । रेखाले १९९० मा भारतका चर्चित व्यापारी मुकेश अग्रवालसँग बिवाह गरेको थिइन् । उनी त्यो समयका चर्चित हटलाईन गुप्र र निकिताशा बान्ड्रका मालिक थिए । तर उनीहरुको विवाह एक वर्ष पनि टिकेन ।
सम्बन्धमा खटपट भएको कुरा सार्वजनिक भएको थिएन मुकेशले बिहेको एक वर्ष पछि अर्थात १९९१ मा रेखाको सलको प्रयोग गरेर नै देहत्याग गरेका थिए । उनको मृत्युले बलिउडमा तरङ्ग नै मच्चायो तर उनको मृत्युको रहस्य भने गुपचुप नै राखियो । अहिले सम्म पनि उनले यस्तो निर्णय किन गरे भन्ने खुलेको छ्रैन । तर यो घटना पछि भने रेखाको ब्यवसायीक जिवनमा निकै ठूलो असर गरेको थियो ।
उनका अघि निकै धेरै चुनौती आए । धेरैले रेखालाई गलत सोचे । अनुपम खेरले त उनलाई निकै तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेका थिए । मुकेशले देह त्याग अघि एउटा नोट लेखेका थिए तर त्यस्मा उनले कसैलाई पनि आरोप लगाएका थिएनन् । उनले आफ्नो साथी तथा मनोचिकित्सक मुकेश अग्रवाललाई आफ्नो २ सन्तानको ख्याल गर्न र सम्पत्ति सम्हाल्न आग्रह गरेका थिए ।
तर उनले आफ्नो सम्पत्ती रेखालाई भने नदिनु भनेका थिए । आफ्ना सन्तान मात्र सम्पत्तीको हकदार भएको उनको भनाई थियो । रेखाको बारेमा किताब लेख्ने यासिर उस्मानका अनुशार मुकेशले नोटमा रेखालाई नराम्रो भनेका थिएनन्, उनले रेखालाई उनी आफै सक्षम छन् त्यसैले मेरो सम्पत्तीको उनलाई आवश्यकता छैन भनेर लेखेका थिए । मुकेशका नजिकका मित्र तथा पुलिस कमिस्नर नीरज कुमारले रेखाले मुकेशको सम्पत्तिमा कहिले पनि आखाँ नलगाएको र अंश नलिएको बताउँदै आएका छन् ।
रेखाले मुकेशसँग पैसाको लागि विवाह गरेको चर्चा गरिएको थियो । तर ति हल्लाहरुलाई रेखाले गलत सावित गरिदिएकी थिइन् । मुकेशको परिवारवाट रेखाले एक पैसा पनि लिएकी थिइनन् । आफुहरुसँग एक रुपैयाँ पनि नमागेको मुकेशका भाइले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
Prevकेटिले केटि संगै बिहे गरे भन्छन् केटा भन्दा केटि केटी नै बढी मज्जा आउछ , यसरी खोले सु’हा ग रातको पोल (भिडियो सहित)
Nextगुडिरहेको कारमा मेकअप गर्दै थिइन् युवती, एक्कासी आँखामा छिर्यो आइब्रो पेन्सिल (भिडियोसहित)
राति देखि चितुवा र कुकुर एकै शौचालयमा फसे, बिहान जे भयो सबै चकित परे !
कन्चनको औषधी रोकियो अब भगवान भरोसा ,आज ४६ औ दिन (भिडियो हेर्नुस् )
अब घरजग्गा किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा लागु भयो नयाँ नियम
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा… (3164)
क्यामेरामा रेकर्ड नभएको भए कसैले पत्याउने थिएन यो घटना, जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस (2792)
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1447)
लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम (1043)
‘मेरो बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो’, भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियो) (599)
सुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित) (396)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (380)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (375)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (363)
पूरा हेर्नुहोस मात्र9लाख 99 हजार मा घर बिक्रीमा (333)
बारामा माछापालनका लागि पोखरी खन्दा श्रीहरि विष्णुको १३ औं शताब्दीको मूर्ति भेटियो
दाँ’त कि’राले खाएर हैरान हु’नुहुन्छ ? अ’पनाउनुहोस् यी उपा’य !